ओलीले गरेका दर्जनाैँ गल्ती, जुन सच्चिए प्रचण्ड र बाबुरामका मनहरू शान्त हुन्छन ! « Dainiki
२० श्रावण २०७७, मंगलवार १९:१६
केहि दिन यता नेपालमा एउटा थेगो खुब चलेको छः ओली सच्चिनुपर्यो । अहिले यो यस्तो मन्त्र बनाइएको छ कि यसको जप नगरी न त चुलो बल्छ, न त ओली इतर राजनीतिक खिचडी पाक्छ । खासगरी नेकपा भित्र प्रचण्ड, माकुने कम्रेडहरू मात्र होइन, अन्य विपक्षी नेताहरू र छिमेकी देशका नेता, मिडिया समेत सबैको मुखबाट एउटै स्वर, एउटै बाक्य सुन्न पाइन्छः ओली सुध्रिनु पर्यो ।
यो लिखुरे बाक्य देशको केन्द्रीय थ्यौरी नै भैसकेको छः ओली सच्चिनुपर्यो । यो थ्यौरी यति लोकप्रिय हुनुमा जस जान्छ पूर्व प्रम डा बाबुरामलाई किनकी थ्यौरीका प्रतिपादक उनै हुन् । उनको दिमागले पहिल्यायो की ओली सच्चिनुको विकल्प छैन । सच्याउनुको भाषिक अर्थ हुन्छ टुटेफुटेको बस्तुलाई बनाउनु, (शब्दकोष) तर यहाँ सच्चिनु भनेको त्यस्तो कर्म हो जहाँ पहिले त्रुटी वा गल्ती गरिन्छ र फेरी त्यसलाई जस्ताको तस्तै पार्ने जुक्ती अपनाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
मानिसको एउटा सर्वमान्य हुन्छ गल्ती नगर्ने । तर जानेर वा नजानेर कहिँ कतै गल्ती भैहालेछ भने त्यसलाई सच्याउने । तर यहाँ ओलीका मिस्टेक मात्र सच्याउने भनिएको छैन, सिंगै मान्छे सच्चिनु पर्यो । भट्टराइजी पुष्टि गर्नुहुन्छः ओलीले एउटा हैन अनेकौं गल्ती गरेका छन् । पहिलो त अकास्मात, पार्टी फोर्ने अध्यादेश ल्याए । हठात अर्काको पार्टी फोर्ने साजिस गरे । आर्काको नेतालाइ तानेर रातारात मन्त्री बनाइदिने चेष्टा गरे ।
उता बोसिय तत्वदेखि बेसार पुराण सुनाए । त्यतिले नपुगेर भारतीय अयोध्यामा विराजमान भगवान रामलाई नेपालको ठोरीमा ल्याएर अलपत्र पारे । उनका यावत गल्तीहरू हेर्दा अब ओलीका एउटा वा दुईवटा काम कारबाही वा बोली मात्र सच्याएर पुग्दैन । उनका बोल्ने मुख, हेर्ने आँखा, सुन्ने कान, लेख्ने हात आदि सच्चिन सक्दैनन् । सबै बिग्रीसके । अब सिंगै ओली नै नसच्चिइ हुन्न । यस्तो अदभुत थ्यौरी डाक्टरसापले तब प्रतिपादन गरे जब कमरेड महेश बस्नेतले उनका नेता डाक्टर सुरेन्द्रलाई रौतहट पुगेर काठमाडौं ल्याए ।
आफ्ना पार्टीका नेता सत्तासीन पार्टीमा गै मन्त्री हुनलागिसक्दा समेत वेखबर हुनुपर्दाको पीडा र रिसले भाउन्निएका भट्टराईले एकाएक घोषणा गरे, ओली खतरनाक हुन् । अझ बढेर उनले ठोकुवा गरे, अब ओलीमा सच्चिने कुनै सम्भावना छैन । उनलाई सत्ताबाट च्युत गरिनु पर्दछ । १० बर्षे जनयुद्ध र १७००० नेपाली युवा युवतीका रगतसंग साँटेको उनको पारखी दिमागले निश्कर्ष निकालेछः ओली सानो चेसको गोटी हुन् जसलाइ बोर्डबाट फुत्तै हटाउन सकिन्छ । यो दुन्दुभी बजाउन न्वारनदेखिको बल लगाए, हार गुहार गरे तर क्यै लागेन । बल्ल अहिले थचक्क बसेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।
डाक्टरसापले भने झैं सच्चिने हो भने ओलीले सच्याउनु पर्ने धेरै छन् । पहिलो त उनले छिमेकीलाई चिढ्याएका छन् छिमेकीको जमिन समेत समेटेर नयाँ नक्सा निकाले । त्यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्यो । उता सिंहमेव जयते भन्दिएर समकक्षीका मन हुनसम्म दुखाए । त्यो फिर्ता लिनुपर्यो । नागरिकताको सवालमा पनि उनी पूरै सच्चिनु पर्छ । विदेशी बुहारीलाई, एक हातमा सिंदुर आर्का हातमा नागरिकता दिने गरि विधेयकमा सच्याउनु पर्यो । उता भारतीय अयोध्याका भगवान श्री रामलाई बलजफत घिसारेर नेपालको ठोरीमा ल्याएका छन् । उनलाइ ससम्मान भारतीय अयोध्यामा फिर्ता पठाउनु पर्यो ।
यता डाक्टरसापले सच्चिनु पर्यो भन्दै गर्दा सीमा पारी उनका मित्रहरुले त्यो टपक्कै टिपेः ओली अपना कार्य शैलीको करेक्शन करे बर्ना उसको प्रधानमन्त्री कुर्सीसे हम हटाएंगे । टेलिभिजन, युटुव, सामाजिक सन्जाल साथै अन्य मेडीयामा एउटै कर्कश स्वार सुन्नमा आए, ओली भारत के लिए खतरनाक सावित हुवे हैं । एक तो वोह चाइना से मिले हुवे हैं दुसरा वो ऐसे हठी है कि किसीको सुनता हि नहिँ । उसने नेपाल भारत सिमा पर शैनिकों को संख्या बढादि है । उसने हमारे सदियौंका रोटी बेटीको संवन्ध पर विष घोल दिए है । इतना हि नहीँ भारतीय जमीनको नेपालके नक्सेमे ले लिया है । अब पानी सरसे उपर चढचुका है, उसको प्रधानमन्त्री पद से हि नहिँ पार्टी अध्यक्ष्य से हि बेदखल करना होगा । हमारे मित्र प्रचण्ड और माधव कुमार नेपाल जल्द हि वो काम कर पाएगा । हम हमारे मित्र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री होनेका इन्तजार कर बैठे है । इससे पहले कि हम ये सब करे, वोली सुधर जाए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराइ ।
आश्चर्य नै मान्नु पर्छ सत्ता पक्षमा यत्रो समय हंगामा हुँदा प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाका आँखामा भने ओली त्यत्ति विग्रेका छैनन, सुध्रिएकै छन् । उहाँ प्रमप्रति खुस नै देखिनुहुन्छ । यद्यपि युवा गगन थापाहरु भने रविन्द्रका इनफवालासंग बेला बेलामा लोली मिलाउन पुग्छन, ओली सच्चिएनन् । अब हटाउनुको विकल्प छैन ।
यता दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग्ने देउसे भाइहरुको राग हल्का मत्थर भएपनि पूरै विराम लागेको भने छैन । बरु यो अर्ली मनसुन संगै छेउकुना खनजोत गरि लगाएको खेतीमा बल्ल बल्ल धानचमरा देखिएपनि घोगो लाग्ला भन्ने विश्वास कुनै भाइलाइ छैन । यो बेला सबै भन्दा सकस कसैलाइ छ भने तिनै भाइहरलाइ छ जसले कमरेड माधव नेपाललाइ छोएर ममः भन्दै साझा खेतीमा आफ्नो पनि मकैको कुनेउ देखेका छन् ।
किनकी हेर्दा हेर्दै प्रम ओली बढा हठी निस्किए । न तर्कले गलाउन सकिन्छ न बलले । हत्तु हरान मात्रै । खासमा ओलीसंग उनीहरुको गुनासो त्यति ठूलो पनि थिएन । यत्रो दुई तिहाइको पन्चबर्षे लन्च र डिनरहरुमा बेलाइती डाइनिंग टेवल र कुर्सी त आफ्नो भागमा परेन नै, छेउ कुनामा एउटा दुईटा चकटी पिर्कासम्म पनि ओछ्याइ दिएनन् । अब जे त होला भनेर बल गर्दा पार्टी नै सिंगो नरहने भो । यदि यस्तो दिन आइहाल्यो भने झन अर्को फसाद । बहुदलीय जनवादको उही पुरानो घर लिपापोती गर्ने कि एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको माला जप्ने ?
नयाँ घरमा जान पनि सजिलो कहाँ छ र ? न संस्कृति मिल्छ न त भाषा । अन्तरजातीय भित्रिएकी बुहारीले भोग्ने नियति आइलाग्ने छ । न सासु ससुरालाई ढोग गरेको मिल्छ न बोलिवचन, मान मर्यादा । त्यस्तो घर गरेर खाने कसरी ? कुनै हालतमा गइन्न आर्काको सिख्वा छाउन । जसरी पनि पुरानै घरमा बस्ने हो बस्न त । तर यहाँ पनि समस्या उही छः ओली सच्चिनु पर्यो ।
अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड भन्नुहुन्छः ओलीजी सच्चिनु पर्यो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जेएन खनाल भन्नुहुन्छः ओली सच्चिनु पर्यो । सबैतिर सबै भन्छन्ः ओली सच्चिनु पर्यो । छिमेकी भन्छन् ओली सच्चिनु पर्यो । हुँदा हुँदा गाउँ टोलका भुरा भुरी, जोगी सन्यासी सबैले भन्न जान्ने भैसके, ओली सच्चिनु पर्यो । अचम्मको थ्यौरीः यहाँ सच्चिनु पर्ने केवल केपी ओलीमात्र रहेछन् । अरु सप्पै शत प्रतिशत ठीक । पहिल्यैदेखि लम्मरी सुन ।
के साँच्चै ओली सच्चिनु पर्ने हो त ? यो जीव मण्डलमा सजीव प्राणी जति छन् सबल पक्ष र कमजोरी सबैका छन् । ओलीका पनि छन् कमजोरी तर आज जजस्ले ओलीलाई सच्याउन आ-आफ्नो दलील पेश गरिरहेछन्, तीनले भने जस्तै गरि सच्चिनु जरुरी छ त ? के एक लाख भन्दा बढी कार्यकर्ताले यहि भनेका छन् ? तीन करोड नेपाली जनताले भनेका छन् ? हो, कार्यकर्ताले भनेका छन् चाँडो महाधिवेशन हुनुपर्यो । जनताले भनेका छन्ः ओली सरकारले कुरा भन्दा काम बढी गर्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ।
कसलाई थाहा छैन र सच्चिनु भित्र लुकेको रहस्य ? ललिता निवास बालुवाटारको फाइल बन्द गर्नु, क्यान्टोनमेन्ट एकाउण्ट फाइल बन्द गर्नु, बर्षौं काम नसकेर देशलाई दुहुनो गाइ बनाइराख्ने ठेकदारहरुलाई कालो सूचीमा नराख्नु, अवैध सुनको कारोबार पुनः यथावत चालु गर्नु, प्रदेश मूख्यमन्त्री र नियुक्तिहरुमा पुनः समानुपातिक भागबण्डा मिलाउनु, दक्षिण छिमेकीका निर्देशन शिरोधार्य गर्नु आदि कर्म गर्नु हुन् । तर यसो गर्नु देश र जनताका निम्ति ठूलो धोखा हो । जनताले जुन विश्वास प्रम ओलीलाई दिएका थिए त्यसप्रति विश्वासघात हो ।
आफ्नो कुर्सी जोगाउने नाममा यस्तो गरियो भने ओलीको अस्तित्व त रहन्न नै, जनताले उनकै विरुद्धमा झ्याली पिट्नेछन् । महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएका हुन् पार्टी अध्यक्ष ओली । पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने जनअभिमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ओली । कसैले अक्करमा पारेर उछिट्याउन खोज्नु न कार्यकर्तालाई मान्य छ न त जनतालाई । अब आगामी महाधिवेशनले अध्यक्ष चयन गर्नेछ । अबको २९ महिना पछि हुने चुनावले अर्को सरकार निर्माण गर्नेछ । सबैले आआफूलाई हेरौं, सच्चिऔं । को कित सच्चियो ? निर्णय जनताले गर्नेछन् ।
समसामयिक विषयमा कलम चलाउने पाण्डे पर्यटन व्यवसायी हुन ।